Iziphesheli zeNintendo switchch Black Friday 2020 - Ukunikezwa Okumangazayo - Amagajethi
INintendo ishintsha ukuthengiswa kwangoLwesihlanu omnyama kuyinto edingekayo kubadlali emhlabeni jikelele. Kuyinto yesikhulumi se-console esithandwa kakhulu ku-intanethi. Abasunguli be-Wii franchise banethemba lokukhuphula izinga lokuhlangenwe nakho kwabo kwezemidlalo. Ukuthengiswa kwangoLwesihlanu omnyama kulapha, futhi kufanele sibheke izaphulelo ezitholakala online. Kunamathani abasebenzisi abasebenzisa i-intanethi abafuna ukuthenga okungabizi kakhulu.
Ukuthengiswa kobuchwepheshe kuyanda. Ungabona ukwanda okusheshayo kwenani labantu abafuna ukuthenga amakhonsoli amasha. Lezi zilungele abasebenzisi abajabulela i-Nintendo franchise.
I-Nintendo switchch 2 - Usuku lokukhishwa, ama-Specs
Izipesheli zikaNintendo Shintsha uLwesihlanu:
Ukuthengiswa konyaka ngamunye kweBlack Friday kunikeza izaphulelo ezinkulu kakhulu kubuchwepheshe obusha nobudala. Ngo-2020 ungalindela ukubona ukuthengiswa okuhle kakhulu kwemvume yokushintshwa kweNintendo. Ezinye zezitolo ezithandwa kakhulu e-USA zinikeza izaphulelo ezinkulu emshinini. Ake sibheke ukwehla kwentengo okwenzeka kuwo wonke amapulatifomu amakhulu.
Ithagethi yindawo ozoya kuyo yezobuchwepheshe e-USA. Inesisekelo esikhulu sabasebenzisi futhi ifinyeleleka kalula. Njalo ngonyaka baqhamuka nokuthengisa okuthokozisayo kwamadivayisi eNintendo. Ungathola isaphulelo esihle kumshintshi weNintendo phakathi nenkathi emnyama ye-tech yangoLwesihlanu.
INintendo switch switch con bundle ne-Mario Kart 8 Deluxe edition isidayiswa ngo- $ 299. Kuyisivumelwano sokweba kulabo abafuna ukujabulela imidlalo emangalisayo yeNintendo. Uzothola nezinyanga ezintathu ku-inthanethi mahhala ngale Nqwaba. Noma ngubani anga-oda ukushintshela kwakhe kwe-Nintendo online noma okungaxhunyiwe ku-inthanethi nge-Target.
Bheka Iziphesheli Zethagethi
Thola isaphulelo sakho osheshayo namuhla nobuchwepheshe besipiliyoni kunanini ngaphambili. Ungathola futhi inguqulo yeNintendo switch Lite lapha nge $ 199 ngesikhathi sokuthengisa kweBlack Friday.
I-Walmart isitolo esikhulu kunazo zonke e-USA. Ungalindela ukubona imiphumela emnandi ngale webhusayithi. Ilungele labo abafuna ukuthenga iswishi yeNintendo ngokushesha. Iketanga elikhulu lokuthengisa likunikeza amadili amahle kakhulu. INintendo switchch okwamanje itholakala ngentengo engabizi ka- $ 299. Inqwaba iyatholakala kuzo zonke izitolo zayo.
Ungathola ukulanda okuphelele komdlalo kukaMario Kart nezinyanga ezintathu zemidlalo ye-inthanethi engaphazanyiswa. Ziletha ezifundeni eziningi e-USA. Uma idolobha lakho lingenayo i-Walmart, khona-ke iwebhusayithi yabo ukubheja okuhle kakhulu. Isitoko siyaphela, ngakho-ke shesha ngokuthenga kwakho.
Bheka Iziphesheli kusuka kuWalmart
Isikhulu sesitolo sezobuchwepheshe sikunikeza amadili amangalisa kakhulu kuziduduzo namuhla. Isitolo esithenga kakhulu sizokwenza ukwazi ukuthenga iswishi yeNintendo ngamanani aphansi ngoLwesihlanu omnyama. Lapha ungathola futhi nezindlela ezilula kakhulu zezimali. Imali engu- $ 299 ingancishiswa ibe ngu- $ 25 ejwayelekile yezinkokhelo zenyanga.
Isikhathi sokubuyisa sibuye sanda ngewebhusayithi yabo. Uma uthola into enephutha, khona-ke abasebenzisi bangafuna ukubuyiselwa kuze kube ngu-16 Januwari. Kwenziwa ukugcina isimo sobhadane engqondweni. Kuzoba namathani ama-oda endaweni yesikhulumi kungekudala. Yenza ukuthenga kwakho namuhla!
Hlola Iziphesheli ezivela ku-BestBuy
I-GameStop ingelinye lamapulatifomu athandwa kakhulu atholakala kwi-inthanethi ngezidingo zakho. Abantu basebenzisa ipulatifomu kuzo zonke izidingo zabo ze-console. Ungavakashela isiza sabo namuhla uku-oda inqwaba yakho yeNintendo Shintsha. Kusebenza kakhulu kubasebenzisi abafuna ukuzwa amandla okudlala. Ubuye uthole izinzuzo njengezitolimende ezilula zanyanga zonke ngokuthenga kwakho. Iwebhusayithi yeGamestop iyipulatifomu ethembekile yokuthenga kwakho.
Ungavakashela ipulatifomu noma izitolo namuhla. Izitolo zabo ezingaxhunyiwe ku-inthanethi nazo zingaba nesitoko esikhulu senqwaba. Ukuthengiswa ngakunye kwangoLwesihlanu omnyama kubalulekile ukutshala imali kumikhiqizo emihle kakhulu. Sebenzisa lesi sixhumanisi ukuthola isivumelwano namuhla!
Hlola Iziphesheli kusuka ku-GameStop
I-Amazon nayo izoba nesaphulelo kungekudala ku-Bundle. Ungalindela ukuthi amanani ezokwehla ngosuku lokugcina lwesizini yokuthengiswa kweBlack Friday.
Sithemba ukuthi unesipiliyoni esihle ngokuthenga. Umhlahlandlela ukuvumela ukuthi uthole amapulatifomu wakamuva wokonga imali. Isikhathi esimnyama sangoLwesihlanu yisikhathi esihle sokwenza utshalomali lobuchwepheshe. Ilungele labo abajabulela ukusetshenziswa kwesikhathi eside. Uzothola izinzuzo ze-premium ngamanani angabizi kakhulu. Yizame namuhla bese uhlangabezana nezinsizakalo zekhwalithi.
amazon 5 ikhadi lesipho lamahhala
u-prime student vs u-prime ojwayelekile
thola isikweletu sesitolo samahhala se-playstation
amasayithi wokulanda ama-movie wamahhala wamaNgisi
indawo engcono kakhulu yezinhlelo ze-tv